UCanzibe 16, 2018 admin
blockchain ETF New uqala e NYSE
A fund blockchain Exchange-wasebenza entsha eqaliswe ngoLwesithathu kwi-New York Stock Exchange.
le ETF (BKC) ibamba kwizabelo 32 Iinkampani abasebenza cryptocurrencies okanye ingxaki kwezobugcisa blockchain. Le ETF ke iqhutywa ngu Rex Izabelo elawulwa ngokufanelekileyo yi Brian Kelly, ngumnikeli CNBC kunye nentloko BKCM, esiqala isicwangciso asethi digital ukuba abathengi.
Le ngxowa-mali kwakhona ibamba kwizabelo Square kunye chipmaker Advanced Devices Micro.
French Finance UMphathiswa uthi yena bayayithanda cryptos
The French UMphathiswa wezeMali, Bruno Le Maire, uye waba ligosa kakhulu senior zaseYurophu ukuze ngokuphandle inkxaso ye crypto njengoko wavakalisa isithuba bakhe bona 'zizonke yaye wazimisela inkxaso. "
Le Maire kutshanje uthe, ngokutsho inguqulo rough:
"Ndaba ezintsha kwanyakenye, kodwa ngoku mna ndiyazingca. Kwathatha unyaka. Makhe ukufundisa bethu abemi amanye ukwenza France kwindawo yokuqala blockchain kunye crypto-asethi ezintsha eYurophu. "
Coinigy uqala ukubhaliswa esekelwe crypto yorhwebo app
Coinigy, iqonga cryptocurrency yorhwebo yelifu-based, ubhengeze kwasungulwa Coinigy Mobile, isicelo urhwebo cryptocurrency mobile kubhalisa-based for iOS kanye Android, ngokubonelela abathengi kunye iqonga norhwebelwano phantse 20 yokutshintshiselana ne lwedatha kuyo ngaphezu 40 zingxoxo.
Ngokungafaniyo phantse onke amaqonga cryptocurrency yorhwebo, i Coinigy Mobile urhwebo app asebenze imodeli isikhokhelo apho abasebenzisi anikwa ukufikelela kwi eqongeni kunye nokusebenza yayo $21.95 ngenyanga.
imigodi Bitcoin ovelisa izixhobo iifayile lakwaKanan for $ 1B Ipo
LakwaKanan Inc., umenzi yesibini ngobukhulu ehlabathini kwimpahla yentsimbi kwemigodi bitcoin, sangenisa isicelo edwelisa ku Hong Kong stock exchange, oku kuya kuba inkulu enxulumene Ipo crypto ehlabathini.
LakwaKanan ijolise ukuqala urhwebo msinyane nje ngoJulayi, umntu ne ulwazi lo mba uthe, Ubuza ukuba kuchongwa kuba ulwazi uyimfihlo. IKHAMPANI, ezinze e Hangzhou, wathengisa 300,000 rigs zemigodi bitcoin kunyaka ophelileyo yaye inzuzo 1.3 billion yuan ($205M). Kulo nyaka uphelileyo, ingeniso net inyuke ngaphezu sixfold, ngokutsho nokufakwa Tuesday xa.
Kuhlu lakwaKanan abe ngowamazibulo Hong Kong Ipo kushishino cryptocurrency i.
platform izimali Social eToro ukuba asungule exchange crypto in US
eToro, iqonga izimali lwentlalo, uqala exchange cryptocurrency yamphako mobile, kunye nokwandisa kungena United States.
“Abathengi kulo lonke ihlabathi kufuneka ukufikelela kwi izixhobo kufuneka inxaxheba kwiimalike cryptocurrency, kungakhathaliseki yobungcali babo,” CEO Yoni Assia uthe ukukhululwa press.
Abarhwebi cryptocurrency Top ziya kuba nako ukuze ifumane ingeniso ngokwenza eziselubala iiphothifoliyo zawo eToro kunye nokuvumela ezinye nabarhwebi ukukopa yezandla zabo.
Inkundla iye 10 abasebenzisi million evela 140 amazwe, evela eTshayina naseRashiya eSwitzerland kunye United Kingdom.
Nangona kungekho lwexesha lanikwa kuba xa iza kufumaneka kwi-US iinketho cryptocurrency, eToro uceba ukunikela urhwebo cryptocurrency kulawulo zonke kweli lizwe.
iirhafu Azerbaijan ingeniso efunyenwe cryptocurrency
Azerbaijan unzima ingeniso efunyenwe cryptocurrency, ngokutsho Nijat Imanov, usekela mlawuli jikelele we-nkqubo werhafu kunye nesebe uphando ngobuchule Irhafu Ministry, ngokutsho lweNtsingiselo News Agency yelizwe.
Ukuba umntu othenga cryptocurrency kwaye iyithengisa amaxabiso aphezulu, inzuzo ibhalwe njengengeniso kwaye kuxhuzulwa irhafu, Imanov uthe, ulibize irhafu ingeniso ngenxa amaqumrhu asemthethweni kwaye irhafu yengeniso kumntu ngamnye.
Blockchain News 27 EyoMqungu 2018
$524M NOT yebiwa ...
Mercedes Liqulunqa Crypto Coin ukuba umvuzo Eco-Driving
Daimler, i German ...
Imibala United of Benetton liqalisa ukwamkela cryptocurrency e Lithuania
Ukwamkela cryptocurr ...
Post Previous:Blockchain News 15.05.2018
Post Next:Blockchain News 17.05.2018